Kwenzani ukuguquka kwesimo sezulu ezilwandle zethu? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Njengoba sike sakhuluma kwezinye izikhathi, ukuguquka kwesimo sezulu kuthinta wonke amagumbi omhlaba. Futhi-ke, bekungeke kube kuncane olwandle nasolwandle. Imiphumela yalo ebhubhisayo iguqula izimo zokuphila kuzo zonke izilwandle zomhlaba.
Okwamanje, umphumela owenza ushintsho olukhulu ezimweni zokuphila ezilwandle ukwanda kwamazinga okushisa emanzini angaphezulu. Kwenzani ukuguquka kwesimo sezulu ezilwandle zethu?
1 Ukwanda kwamazinga okushisa olwandle
2 Ucwaningo ngokuguquka kwesimo sezulu ezilwandle
3 Imiphumela yokushintsha kwesimo sezulu ezilwandle
Ukwanda kwamazinga okushisa olwandle
Amazinga okushisa kwamanzi angaphezulu ayanda futhi ngawo, i-phytoplankton, okuyisisekelo sakho konke ukudla kochungechunge lokudla olwandle, kuyehla. Izimo zezulu kanye nezinguquko ekushiseni kubangela ushintsho kumagagasi olwandle.
Izinguquko emisakazweni yolwandle zingazithinta kanjani izinhlobo zezinto eziphilayo? Ilula kakhulu, i-phytoplankton yakhiwa izitshalo ezincane eziqhakaza futhi ezitholakala emanzini. Njengoba imisinga namaphethini wokujikeleza kwawo kuguquka, ukudla kwezinhlobo eziningi ezikusekelayo kushintsha indawo. Ngale ndlela, baphoqa lezi zinhlobo ukuba zigudluze futhi ziguqule indawo ezihlala kuyo, zibeke engcupheni yokubhekana nezinye izinhlobo zezilwane eziyingozi kakhulu futhi ziziphoqe ukuba zivumelane nezimo ezintsha.
Konke lokhu kubanga imithelela emibi emikhiqizweni yasolwandle futhi kunciphisa amathuba okusinda kwezinhlobo eziningi.
Ucwaningo ngokuguquka kwesimo sezulu ezilwandle
Ucwaningo luthole izindawo eziyisithupha ezinkulu zeplanethi okufanele zize zivikelwe ukuze impilo iqhubeke nokuba khona olwandle. Ucwaningo lwenziwa ngabaphenyi base-Australia, New Zealand nabaseSpain. Ukuze kuphenywe izici zemvelo nokuthi ukuguquka kwesimo sezulu kubathinta kanjani, basebenzise imininingwane evela kumilaza yama-satellite aqoqwe eminyakeni engama-30 edlule ukuthola ukuthi ukuguquka kwesimo sezulu kuzithinta kanjani izilwandle zomhlaba wonke.
Ngenxa yokuthuthuka kwezobuchwepheshe, kube nokwenzeka ukuthola izithombe zokuthi ukuguquka kwesimo sezulu kuzithinta kanjani izilwandle emhlabeni jikelele ngokulungiswa kwezithombe akufinyelelwanga kuze kube manje. Yize i-physics eyisisekelo ithi izimo ezisendaweni enamanzi zigcina zifana yonke indawo, ngobukhulu bolwandle izinto azinjalo. Ngalesi sizathu, ukufudumala kwembulunga yonke akufani kuwo wonke amanzi futhi akuyona nje umbuzo wobubanzi.
Imiphumela yokushintsha kwesimo sezulu ezilwandle
Imiphumela edalwa ukuguquka kwesimo sezulu ezilwandle, noma okungenani okuphawuleka kakhulu futhi esheshayo, yile:
Ukufudumala kwamanzi angaphezulu
Ukwehla kokukhiqizwa kwe-chlorophyll ezitshalweni
Izinguquko emaphethini wemisinga yolwandle
Ucwaningo lushicilelwe ku Ukuthuthukiswa Kwezesayensi, futhi ikhombisa izitayela ezimbili eziphikisanayo. Ngakolunye uhlangothi, ukufudumala kwamanzi angaphezulu akuyekile ukwanda kusukela ngawo-80 wekhulu leminyaka elidlule. Ngakolunye uhlangothi, ukuhlushwa kwe-chlorophyll nge-cubic meter ngayinye akuyekanga ukuncipha kusukela lapho. Umsebenzi uphinde walinganisa okuguquguqukayo kwesithathu: imisinga yolwandle, labo ababhekele ukusabalalisa ukushisa emhlabeni wonke, ngokuhlangana nokunyakaza komkhathi, kanye nalabo besimo sezulu. Yize kune-heterogeneity enkulu, ngokujwayelekile le mifula yasolwandle iyancipha.
Ukuhlanganisa zonke lezi zinto ukuthi ososayensi bakwazile kanjani ukucacisa endaweni ngayinye futhi bakwazi ukukala imithelela yokuguquka kwesimo sezulu esilinganisweni sesifunda nesasendaweni. Izifunda ezibandayo yilawo ahlupheka ngokwanda okuthe xaxa emazingeni okushisa amanzi awo futhi kulapho, lapho amanzi ahlanzekile ancibilika eqala ukusebenza, aphazamisa imisinga yasolwandle. Ngokuya ngezinhlobonhlobo zezinto eziphilayo, iNyakatho ye-Atlantic kanye nomngcele osenyakatho nePacific babhekene nokufudumala okunomthelela ekuthombekeni kwezinto eziphilayo zasolwandle.
Njengoba ukwazi ukubona, ukuguquka kwesimo sezulu kuthinta wonke amagumbi eplanethi futhi lapho ifundelwa ngokwengeziwe, kulapho kuqwashiswa khona ukuthi imiphumela ingeyangempela futhi ayiyeki ukwanda.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Kwenzani ukuguquka kwesimo sezulu ezilwandle zethu?
UMaria de los Angeles Quesada Rivera kusho
Kuyashaqisa okwenzeka ekugcineni komhlaba ngobuningi bemvelo
Phendula uMaria de los Angeles Quesada Rivera